It is me. Ko Niknayman.: သံဃာထုကြီး. မိန့် မှာ ပန်ကြားချက်အပေါ် မကဒတမှ ထပ်လောင်း ပန်ကြားချက်၊
သံဃာထုကြီး. မိန့် မှာ ပန်ကြားချက်အပေါ် မကဒတမှ ထပ်လောင်း ပန်ကြားချက်၊
၁။ သံဃာတပ်ပေါင်းစုကြီးမှ ဦးဆောင်ကာ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံအ၀ှမ်း ချီတက်ဆင်နွဲမည့် အထွေထွေလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည်ကို အားပေးထောက်ခံလိုက်ပါသည်။
၂။ သံဃာထုအနေဖြင့် သာသနာ့အလံတော်ကို ကိုင်စွဲချီတက်သကဲ့သို့ကျောင်းသားထုမှလည်း တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို ကိုင်စွဲချီတက်ရာ လမ်းကြောင်းအသီးသီးနှင့် အနှောင့်အယှက် အဟန့် အတား ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းမည့် အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွားနိုင်ရန်အတွက် လူထုကြီးပါဝင် ၀န်းရံမှ ဖြစ်ပါမည်။
၃။ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (NLD) နှင့်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) တို့ ကို ၀န်းရံနိုင်မည့် လူထုတပ်ပေါင်းစုကြီးတရပ်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လည်း ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပေါက်ပေါက်လာမည့် လူထု တပ်ပေါင်းစုကြီးကိုလည်း
၄။ မကဒတအနေဖြင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး အရှိန်မြင့်တင် အောင်ပွဲခံနိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းစုံဖြင့် အားထုတ်ကြိးပမ်းနေပါကြောင်း ဖော်ပြရင်း ဆရာတော်သံဃာတော်များ၊ ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်အတူ အောင်ပွဲရရှိသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပန်ကြားလိုက်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်၊
Posted by Ko Niknayman at 6:05 AM